MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA IRISH WOLFSKY - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Irish Wolfsky
Husky / Irish Wolfhound ey isku dhafan oo isku dhafan
'Kani waa eeygayga Czar. Isagu waa 5 sano jir Irish Wolfhound / Husky iskutallaabta. Czar waa eeyga ugu farxadda badan ee aan abid arko. Wuxuu jecel yahay socodka, socodka baabuurta, ku ordaya ardaaga (barafka ama cowska), socodka hawdka iyo taga xeebta (in kasta oo uu ka baqayo biyaha oo uusan dabaalan doonin). Markuu gudaha ku jiro Czar wuxuu jecel yahay inuu hooyadiis ku salaaxo, seexdo oo guud ahaan la qaboojiyo. Wuxuu jecel yahay inuu jiifto afaafka hore ee xagaaga, si uu u daawado adduunka oo maraya. Wuxuu saaxiibtinimo badan la leeyahay dadka iyo eeyaha kale ee uu sida gaarka ah u jecel yahay carruurta. '
Irish Wolfsky ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Siberia Husky iyo Irish Wolfhound . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Czar waa wiil weyn, miisaankiisuna yahay 90 rodol. Wuxuu aadayaa 3-4 socod maalintii, sabtiyada iyo axada waxaan jecel nahay inaan tamashle u aadno ama socod dheer - xiisaha! Hal caado oo xun, waa orodyahan !!! Uma oggolaan karo inuu ka baxo xadhig ilaa uu ku jiro aag deyr leh mooyee, maxaa yeelay isagu handarraabbadeedii . Waxaan ceyrsaday dhowr jeer, maahan madadaalo, waana deg deg yahay anigu ma qaban karo sidaa darteed Czar wuxuu ku sii sugnaanayaa xadhig. Waxaan Czar ka helay Bulshadayda Deegaanka, waxaan nasiib u helay inaan helo wehel layaableh. Czar aad buu u dabeecad wanaagsan yahay oo aad u dhaqan fiican yahay. Wuxuu yaqaan sida loo fadhiisto, joogitaanka, jiifka, seexashada iyo shanta sare (rux jeex). Wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ka farxiyo qof kasta. Czar aad buu u faraxsan yahay waana ku qanacsan yahay.
Czar Irish Wolfhound / Husky isku darka 5 sano jir jecel barafka.
Czar Irish Wolfhound / Husky isku darka 5 sano jir
Liiska eeyaha eyda ee loo yaqaan Irish Wolfhound Mix
sawirrada eyda dillaacsan ee Shiinaha
dooxada jarmalka madow ee chow mix
isku dhafka Jarmalka feeder feeder lab
shey shaybaar sheybaar isku qasan yar yar
tan iyo cadaan shih tzu